Website တစ်ခုရှိနေခြင်းဟာသင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုသလဲ? - Infoava IT Solutions & Software Development Company
ပုံမှန်အားဖြင့် Client တွေသိလိုတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာ Website တစ်ခုရှိရုံနဲ့ ငါတို့စီးပွားရေးက ဘာအကျိုးသက်ရောက်သွားမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တမ်းတွေအရ စားသုံးသူ 90 ရာခိုင်နှုန်း ဟာ သူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေ ၊ သူတို့ရှာဖွေချင်တဲ့ လုပ်ငန်း အချက်အလက်တွေကို ရရှိဖိ့အတွက် Internet ပေါ်မှာရှာဖွေမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယနေ့အချိန်သည် လူတိုင်း၏လက်၀ယ်တွင် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုယ်စီဖြင့် အင်တာနက်ကိုအလွယ် တကူအသုံးပြုနိုင်ကြပြီဖြစ်ပြီး နေ့စဥ်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကို အင်တာနက်ပေါ်မှပင်ရှာဖွေ ကာအသုံးပြုလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
Website တစ်ခုရှိနေခြင်းဟာ သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးအများကြီးရှိစေပါတယ်။ ကိုယ့် Company ရဲ့ Product List တွေကို ဖောက်သည်က သိချင်တယ်ဆိုပါစို့ များပြားလှစွာ သော စာရင်းစာအုပ်တွေ စာရွက်စာတမ်းတွေအစား Website Link လေးကိုသာပေးလိုက်မယ် ဆိုရင် Client ဟာအချိန်တိုအတွင်းမှာ သူသိလိုတဲ့ Product အကြောင်းကိုစုံစုံလင်လင် သိရှိ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအသုံး၀င်မှုတစ်ခုကတော့ ဥပမာ မိမိရောက်နေတဲ့မြို့မှာဘယ်လို စားသောက်ဆိုင်တွေရှိသလဲသိချင်လျှင် Google မှတစ်ဆင့် ရှာဖွေမှုပြုလုပ်နိုင်ပြီး သင့်လုပ်ငန်း Website နှင့် တည်နေရာကိုပါပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Company နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ တည်နေရာ၊ ၀န်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းနဲ့ ဖုန်းနံပတ်မျိုး ကအစ သင့် Company Website မှာ ၂၄ နာရီပတ်လုံးပိတ်ရက်မရှိ သတင်းအချက်အလက် တွေကို ြပည်တွင်းပြည်ပမှ အလွယ်တစ်ကူ ရယူနိုင်တဲ့အတွက် ြပည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာမှ ဖောက်သည်အသစ်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အသစ်များရရှိလာစေပါလိမ့်မယ်။
မိမိ ကုမ္ဗဏီ/ရုံးအတွက် Website တစ်ခုလိုအပ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ ခေတ်မှီတဲ့ဒီဇိုင်းတွေ User တွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေမယ့် အကြောင်းအရာတွေနဲ့ သင့်တင့်တဲ့စျေးနှုန်းတွေနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေး နေတဲ့ Infoava Co.,Ltd ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Infoava IT Solution isaMyanmar based Software Application Development Company. Our Solutions includes Web Design, Website Development, Enterprise Web Applications Development and Mobiles Applications Development. We Provide Customized Web Applications and Services Tailored to Your Present and future needs.
Address : No.70, Romm 4(A), Hledan Road, Kamaryut Tsp, Yangon, Myanmar.
Email : info@infoava.com
Phone : (+95)9791699924, (+95)9791699925
Fax : (+95) 1 511732